September 2021 - Newposts
September 30, 2021 newposts2021 0
ဘဝကို အပျော်ရွှင်ဆုံး ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်နိုင်မယ့် ဖူးစာဖက်ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးပါ ဘဝကို အပျော်ရွှင်ဆုံး ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်နိုင်မယ့် ဖူးစာဖက်ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးပါ ဖူးစာဆိုတာ ကိုယ့်နဲ့ သူ ဆုံဖို့ ဖန်လာတဲ့ ကံကြမ္မာတွေ ရှိတာကို ဆိုလိုကြတာပါ။ ဖူးစာဆိုတိုင်း လက်တွဲရတိုင်း ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရှိကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး […]
မိန်းကလေးတွေ ဝေးဝေး ရှောင်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျားညံ့ ( ၆ ) မျိုး ဘယ်လောက်တောင်ပဲ လန်းနေနေ၊ မိုက်နေနေ လုံးဝ မပတ်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အနားမှာ ဒီလို လူမျိုးတွေက မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအဖြစ် ရှိနေရင် မိတ်ဆွေ ဆက်ဆံရေး အတိုင်းပဲ ထားပါ။ […]
ဆရာမင်းသုခ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် (၁၀) လပိုင်းအတွက် တစ်လစာ ဟောစာတမ်း
ဆရာမင်းသုခ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် (၁၀) လပိုင်းအတွက် တစ်လစာ ဟောစာတမ်း မဂင်္လာပါ ဆရာမင်းသုခ၏ 1.10.2021မှ 31.10.2021 ထိ မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ဟောစတမ်းအပြင် ယတြာလေးတွေပါလို့ သိမ်းထားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ သင်၏ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း ဖတ်ရှု့နိုင်အောင် Share ပေးကြပါ။ မိမိကံကြမ္မာ အဆိုးအကောင်းကို ဆရာမင်းသုခထံ […]
ခြေထောက်ပုံစံက ပြောပြနေတဲ့ သင့်အကြောင်း ခြေထောက်အမျိုးအစားကို ကြည့်ပြီး သင်ဘယ်လိုလူ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်နံပါတ် ကို ရှာဖွေဖတ်ရှုလိုက်ပါ။ နံပါတ် (၁) အမျိုးအစား ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတဲ့ ခြေထောက်အမျိုးအစားကို Stretched Foot လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ခြေထောက် ပုံစံကို […]
ဝိတ်ချနည်းများထဲကမှ နာမည်ကြီး လူကြိုက်များတဲ့ လှဲလှောင်းကာ အကြောဆန့်ရင်း ဝိတ်ချနည်း
မိန်းကလေးများသို့ ပေးစာ (ဖတ်ကြည့်နော်)
မိန်းကလေးများသို့ ပေးစာ (ဖတ်ကြည့်နော်) စိတ်ညစ်ညစ် ၊ ပျော်ပျော် လှလှ ပပ Smart ကျအောင် နေပါ။ ဝင်ငွေထွက်ငွေ ကိုက်ညီ ချင့်ချိန်ပြီး စိတ်ချမ်း သာအောင် သုံးစွဲပါ ။ Stress တွေများလို့ ဝမ်းနည်း အသဲကွဲလို့ရင်ဖွင့် နေမယ့်အစား ခရီးသွားရင်း relax […]
“အိမ်မှာနေပြီး ဘာတွေလုပ်နေလဲ မမေးပါနဲ့” .စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တစ်ဦးနဲ့ ယောက်ျားတစ်ဦးတို့ အပြန်အလှန် စကားပြောနေကြတယ်… ဆရာဝန်….. ခင်ဗျား ဘာအလုပ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပါသလဲ.. ကျွန်တော် ဘဏ်စာရင်းအင်းတစ်ယောက်ပါ ဆရာဝန်… ခင်ဗျား မိန်းမရော?.. သူ အလုပ်အကိုင်မရှိပါဘူး။ သူက အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်သာပါ။ အိမ်မှာ မနက်စာကို ဘယ်သူလုပ်ပါသလဲ..? မိန်းမလုပ်ပါတယ်… သူ […]
ပန်းမကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား… မိန်းကလေး တော်တော်များများက ပန်းတွေကိုနှစ် သက်ကြ ပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာမှ ပန်းတွေကို အထူးတလည် မနှစ်သက်တဲ့ မိန်းကလေး အနည်းစုလည်း ရှိပါ သေးတယ်။ ဒါကြောင့် ပန်းတွေကို မနှစ်သက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား လေးတွေ အချစ်ကို […]
ရှေးခေတ်မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ဘုရင်အဆက်ဆက်ကစပြီး လောကုတ္တရာဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက် များ၌ အတိတ်၊ နိမိတ်၊ စနည်း၊ တဘောင် များကို မူတည်၍ ကြိုတင်ဖြစ်စဉ်များကို နိမိတ်ဖတ်ခဲ့ကြသည်။ ရှေ့၌ လာလတ္တံ့သော အကြောင်းတရား၊ အကျိုးတရား အဖြစ်အပျက်တို့ ကို အကျဉ်းချုံးကာ သယ်ဆောင် လာခဲ့သည့် တေးသီချင်းတို့ကို “တဘောင်”ဟု ခေါ်ဆိုရာ […]
အသားညိုမညျးသူမြားအတှကျ 100ရာခိုငျနှုနျး ထိရောကျမှုရှိတဲ့အသားဖွူနညျး…
September 29, 2021 newposts2021 0
အသားညိုမည်းသူများအတွက် 100ရာခိုင်နှုန်း ထိရောက်မှုရှိတဲ့အသားဖြူနည်း… အသားဖြူဆေးတွေသောက်တာက တကယ်ရောဖြူရဲ့လား၊ ဘေးရောကင်းရဲ့လား၊ လိုးရှင်းတွေကရော အမှန်တကယ် ဖြူလာရဲ့လား? နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုခံရခြင်း ၊ ပတ်ဝန်းကျင်လေထုညစ်ညမ်းခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ အသားခြောက်ခြင်း ၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ လူနေမှုပုံစံမှားယွင်းခြင်း၊ ဓါတုပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ သုံးစွဲခြင်းတို့ကြောင့် အသားညိုမည်းခြင်းကို […]